macdanta wershedaha Bogga Bilicda
Macdanta iyo Saliidda
Soomaaliya waxaa ku jira macdan farabadan oo aan laga faaiidaysan. Sababtoo ah macdantaas waxay u baahantahay maaliyan ama lacag fara badan iyo qalab casri ah iyo weliba dad aqoon iyo xirfad u leh macdanta.
Haddii aan wax ka sheegno qaybaha macdanta iyo meelaha ay ku jiraan, waa kuwan hoo ku qoran:
Berbera: Meel u jirta 15 km waxaa ku kaydsan Jibsam[Gypsum]. Waxaa kale oo Berbera agteeda laga helaa shamiitada.
Buur-hakaba: Waxaa lagu qiyaasay  in ay ku jirto 120 million tons[tan] oo macdan ah, waxaana kamida Yuraaniyam iyo Thorium.
Ceel-buur: waxaa ku kaydsan macdanta loo yaqaan Sepiolite.
Diin-soo: waxaa ku kaydsan qiyaastii 50 million tons oo ah bir-dahaba ama[iro-ore].
Majayahan: oo u dhow Boosaaso waxaa ku kaysdan macdanaha kala ah Tiin, Gypsum,iyo Dahab.
Dhalan: oo u dhow Ceelaayo waxaa laga heli karaa macdanta loo yaqaan Tiin.
Xeebta Jasiira iyo Bacaadka Shalambood: Waxaa ku kaysdan Dahab.
Xaafuun iyo Hurdiye: Waxaa laga helaa Cusbada cuntada [salt].
Waxaa kale oo la sheegay in Soomaaliya ay ku jiraan gaaska dabiiciga ah iyo saliid [iol]. Waxaana laga yaabaa in ay jiraan macdano farabadan oo ku kaydsan Soomaaliya welina aan ladaahfurin.
Dhammaan macdanadaas aan kor ku soo xusnay xaqiiqa ahaan inta xaddiga ah ee waddanka ku kaysan lama hubo, waana qiyaaso iyo mala awaal lasameeyey. Tirooyinka xusani ma aha kuwo lagu helay cilmibaaris qoto dheer. Waxaana akhristayaasha ka codsaneynaa in haddii ay hayaan wax macluumaada oo arintaas ku saabsan ay noogu soo sheegaan emailka hoos ku qoran.
Soomaaliya waxaa ku jira Saliid farabadan oo aan weli siweyn looga faa'iideysan. Haddii aan wax kaxusno goobaha hadda lagu hubo saliidda waxaa kamidda:
Lascaanood agteeda (Sanag)
Meelahaas oo ay ahayd meelihii uu ku socdey baadhistu intii xukuumada la ridin. Laakiin badanka somaliya lama wada baadhin.
afgooye (gaaska dabiiciga ah). xadigiisuna aad u badan yahay.
Waxaan mahad ballaaran u jeedineynaa injineer Ibrahim oo caawinaad nagasiiyey arimaha muhiimka ah ee laxiriira saliidda Soomaaliya dhex jiifta.
Hadii aad u baahatid macluumaad dheeraad ah oo kusaabsan macdanaha Soomaaliya, ka akhri waraysigii SomaliTalk la yeesheen Dr. Cusmaan Salaad Xirsi oo markaas (sept 2000) booqaneyey London, Ontario, canada.
kor macdanta wershedaha Bogga Bilicda
Sannad Xaddiga Sonkorta Waqtiga waxsoosaarka
1926 30 Tons Maalintii
1968 35,000 Tons Sannadkii
1969 40,000 Tons Sannadkii
1970 41,000 Tons Sannadkii
1922 ayaa shirkad Talyaani ah asaastay wershadda cusbada [solar Salt production]. Waxaan laga dhisay Hurdiye - xaafuun. Wershaddaasi waxay soo saari jirtey cusbo dhan 250,000 ilaa 300,000 tons sannadkii. Waxaana wershaddaas hawlgab ku noqday dagaalkii Ingiriiska iyo Talyaaniga ee 1940-1941.
1968 ayaa la dhamaystiray wershadda hilibka ee kismaayo. Waxayna qali jirtey sannadkii 60,000 neef oo lo'ah, si ay u soo saarto 20 million oo hilib qasacadaysan ah.